Dian’ny Filoham-pirenena any ivelany : Fijerena izay hahasoa ny firenena -
AccueilRaharaham-pirenenaDian’ny Filoham-pirenena any ivelany : Fijerena izay hahasoa ny firenena
Maro ireo liana sy mametraka fanontaniana amin’ireo dian’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery, any ivelany. Nitondra fanazavana ny tenany ary nambarany fa tsy fitsangatsanganana sanatriavina ny alehany any fa fijerena izay hahasoa ny firenena Malagasy. “Mbola maro ireo firenena nahazoana fanasana ka hotsidihako, efa maro koa ireo firenena nametraka ny fitokisany amin’ny mpitondra ankehitriny ka manasa antsika. Firenena misandratra i Madagasikara izao satria tafiditra ao amin’ny fikambanan’ireo firenena maneran-tany. Tsy mora ireny dia atao ireny fa mafy ireny, kilometatra maro no aleha, ora marobe no ilaina amin’ny fivezivezena, tsy resahina intsony ny torimaso izay tsy ampy. Isaorana an’Andriamanitra ny fanomezany tanjaka hanatontosana an’izany satria mbola lavitr’ ezaka ny dia hatao eo amin’ny fikatsahana izay hahasoa ny firenena. Na eo amin’ny fitadiavana mpampiasa vola izany na eo amin’ny fanatsarana ny fomba fitantanana dia ambarako fa efa miova tanteraka ny fomba fifampidinihana amin’ny vahiny fa tsy tahakan’ny mahazatra intsony. Mila maneho ny fisiantsika isika Malagasy sy i Madagasikara. Tsy tahaka ireo tany afrikana hafa izay sady akaiky kokoa ireo firenen-dehibe isika ka efa mivondrona amin’izay misy azy, ohatra ny Afrika Andrefana, Afrika Afovoany, Afrika Atsinanana, Afrika Atsimo. Ilaina hamafisina ny fifampitokisana izay fototry ny fifampiraharahana sy ny fiaraha-miasa rehetra.” Nomarihin’ ny Filoham-pirenena ihany koa fa tsy voatery ho fampiasam-bola foana no aleha any ivelany fa fijerena fiaraha-miasa hahazoan’ny vahoaka Malagasy tombontsoa, eo amin’ny lafiny fambolena, angovo sy ny sehatra hafa ihany koa.
“Aoka esorina ao amintsika ihany koa fa tsy voatery ho findramam-bola foana no ataon’ny Filoham-pirenena rehefa mandeha any ivelany. Tsy tahaka ny saka mangata-dava isika sanatria. Raha hiresaka ny dia tany Zambie aho ohatra, firenena manana traikefa eo amin’ny fandrosoana ny firenena aty Afrika io. Raha tany Zambie koa aho, nandefa hafatra mafonja ho an’ireo firenena ao anatin’ny Comesa. Tsy tokony ho izao, ho ahy, ny toerana misy an’ireo firenena mpikambana ao, ka any ivelany indray no manafatra entana betsaka tahaka ny hoe tsy mamokatra na inona na inona ny ato anatiny ka lasa fatiantoka fotsiny. Tsy ny Comesa ihany fa miezaka mijery lalam-barotra sy fiaraha-miasa amin’ireo fikambanana ara-barotra rehetra isika amin’ny ara-drariny sy ny hitsiny, ka hahazo ny anjara masoandrony ireo mpandraharaha Malagasy noho ny tsy fisian’ny tsena na tsy fahafahana mifaninana. Tiako ihany ny milaza fa mora kokoa ny fifandraisantsika ara-barotra samy amin’ny tanin’ny Comesa satria tsy dia manahirana tahaka ny any Eoropa, na Amerika ohatra ny sakana izay takiana amin’ireny fifandraisana ara-barotra ireny.”
Mila vahana ny olan’ny angovo
Na dia eo aza anefa izay finiavana rehetra izay, nanambara ny Filoha fa tsy afaka hiatrika izany isika raha tsy voavaha ny olana atrehina ary lehibe amin’izany ny angovo izay olana iraisan’izao tontolo izao. “Miezaka mitady mpiara-miombon’antoka isika. Anisan’ny vokatra mivaingana tamin’ny dia natao tany Alemana izany satria ry zareo Alema, ohatra, dia afaka mametraka ao anatin’ny telo na enim-olana monja, foibe manodina herinaratra amin’ny angovo ka any amin’ny antsasany mihitsy ny vidin’ny famokarana herinaratra izay aroson’izy ireo. Torak’izany ny fiaraha-miasa amin’ireo orinasa Alema mihoatra ny roapolo, vokatry ny fiaraha-midinika izany tamin’ny “Afrika the rain” izay to-teny ihany amin’ny fampiasam-bola sy ny fanamboarana fotodrafitrasa ka hiara-hiasa amin’ny bankin’ny fampandrosoana matanjaka isika. Tsindriako mafy koa fa namelo-maso ary manamafy ny fifandraisana amin’ny lafiny rehetra eo amin’ny Nosintsika sy ny Alemana iny dia izay nataoko tany iny. Raha tohizako dia izao, nahafa-po tanteraka ny fanasana nataon’ny parlemanta nasionaly tao Berlin.”
Mila fiovam-penitra mahery vaika ny firenena Malagasy
Nohamifisin’ny Filoham-pirenena ihany koa fa raha te-handroso ny firenena Malagasy dia mila fiovam-penitra mahery vaika sy fahavononan’ny tsirairay. “Zava-dehibe loatra mantsy ny toeran’ny parlemanta any Alemana, mirindra ny an’izy ireo ny rafitra politika hitondrany ny firenena, manome fahefana ireo fanjakana isany izay samy mandroso avokoa ny rafitra federaly. Azo tanterahina tsara eto Madagasikara anefa ny fametrahana rafitra izay mampandroso ary isika no mahita azy ka mampety antsika Malagasy. Mitovy hevitra amin’ny fiombonamben’ ny Eveka katolika aho fa mila fiovam-penitra mahery vaika ny firenentsika, hialana amin’ireo fahasahiranana sy korontana raiki-tampisaka izay niainan’ny vahoaka Malagasy. Efa manomboka isika izao amin’ny fitsinjaram-pahefana ara-toekarena, tsy tokony hijanona fotsiny eo amin’ny fanomezana vola ireo kaominina fotsiny anefa izany fa hihoarantsika izany araka ny fahavononana hanitsy na hanova ny rafitra izay niainan’ny firenena hatramin’izay.”
Fa ankoatr’izay nitondran’ny Filoha Rajaonarimampianina Hery fanazavana koa ireo tranga fakana an-keriny sy ny tsy fandriampahalemana ary nambarany fa tsy mitazam-potsiny ny fanjakana fa mihamafy ny fanadihadiana sy ny fikarohana ary tena miady amin’ny famongorana ireo fikambanan-jiolahy mahery vaika ny mpitandro filaminana.